आनन्दका नाममा महिलाहरु योनीमा किन बम हाल्दैछन ? चिकित्सकहरुको गम्भीर चेतावनी | Sambad Media
आनन्दका नाममा महिलाहरु योनीमा किन बम हाल्दैछन ? चिकित्सकहरुको गम्भीर चेतावनी
यौन सम्पर्कका क्रममा योनीमा पैशन डस्ट वा ग्लिटर क्याप्सुल राख्ने बढ्दो ट्रेड खतरनाक हुने चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
सेक्समा बढी आनन्द लिनका लागि मानिसहरु ग्लिटर क्याप्सुलको प्रयोग गरिरहेका छन् ।बेलायतसहित कयौ देशका गाइनकालिजस्टले यसबाट बच्न सल्लाह दिएका छन् । चिकित्सकहरुले यसको प्रयोगबाट काउकुती, पीडा र इन्फेक्सन बढ्ने बताएका छन् । यद्यपि यो बनाउने कम्पनी प्रेटी वुमन इन्कले यसको प्रयोग सुरक्षित रहेको दावी गरेको छ।
प्रेटी वुमन इन्कको वेभसाइटका अनुसार पैशन डस्ट एकप्रकारको स्पार्कलाइज्ड क्याप्सुल हो । जुन योनीमा सेक्सुअल इन्टरकोर्सभन्दा कम्तीमा एकघण्टाअघि राख्ने गरिन्छ ।
यो क्याप्सुलले स्वभाविक योनीलाई तरल र तातो बनाउने गर्दछ । क्याप्सुलबाट बालुवा आकारमा चम्किलो ग्लिटर निस्कन्छ । यो क्याप्सुल क्यान्डी फ्लेबरको हुन्छ ।
यो क्याप्सुलको प्रयो गर्छ । त्यो भने स्पष्ट छैन तर प्रेटी वुमन इन्कको वेभसाइटका अनुसार अहिले आउट अफ स्टक छ । अर्डरको बाढी नै आएको छ।
यो क्याप्सुल जेलटिन ट्याबलेटजस्तै हुन्छ ।जुन योनीमा घुलिन्छ । त्यसपछि असंख्य ग्लिटर पैदा गराउँछ र यसबाट प्लेवर्ड जोश बढ्छ ।
यो क्याप्सुलको मार्केटिङमा एउटा सानो चक्कीले तपाईलाई आनन्दको जादुमय अनुभूति गराउने उल्लेख गरिएको छ।
यद्यपि यो चक्कीका विषयमा मेडिकल जगतसँग सम्बन्धितहरुले सर्वसाधारणलाई चेतावनी दिएका छन् ।क्यानडाका एक फिजिसियन डाक्टर जेन पहलो व्यक्तिहु जसले पहिलोपटक महिलाहरुसँग भने–योनीमा ग्लिटर बम नराखौं ।
उनले चेतावनी दिँदै भने–यसबाट ‘गुड भजाइना ब्याक्टेरिया’ लाई हानी पुग्न । इन्फेक्सनको आशंका पनि बढाउँछ । यसलाई त्यसरी सोच्नु हुन्न कि ग्लिटर लिप ग्लासबाट तपाईको ओड सुरक्षित छ । तब भजाइना पनि सुरक्षित छ। दुवैमा धेरै फरक छ।
डाक्टर जेनले भने–लिप ग्लासलाई तपाई हटाउन सक्नुहुन्छ र लिप ब्याक्टेरिया तपाईको गैस्ट्रोइन्टेस्टनल (आँत) वा गौनरीअ वा एचआईभीलाई नियन्त्रित गर्दछ । उनले यो सबै कुरा आफ्नो ब्लगमा लेखेका छन् ।डाक्टर जेनले यो क्याप्सुलको उक्त दावीको पनि कडा निन्दा गरेका छन्, जसमा प्राकृतिक भजाइनल नै काफी नभएको दावी गरिएको छ।
डाक्टर जेनले लेखेका छन्–म भजाइनल इन्हैसमेन्ट प्रडक्टलाई घृणा गर्छु र घृणा गर्छु । किन हामी भित्र र बाहिर महिलालाई अपमान गर्न चाहन्छौ ।
द वुमन्स हेल्थ क्लिनिकका क्लिनिकल निर्देशक एली डिल्क्सले भने, भजाइनल ग्लिटर पर्याप्त रुपले खतरनाक चलन हो । उनले भने–यसबाट न काउकुती मात्र लाग्नेछ, पीडा र गम्भीर इन्फेक्सनको सामना पनि गर्नुपर्नेछ । यसका साथै तपाईभित्रको पीएच सन्तुलनमा पनि गडबडी हुनेछ ।महिलाहरुको गुप्ताङग निकै संवेदनशील हुन्छ । यसलाई ठिक राख्नका लाग एउटा सानो साबुन र पानीको मात्र आवश्यक छ।
प्रेटी वुमनले आफ्नो सफाईमा भनेको छ–तपाईले यसको जोखिम आफैले उठाउनुपर्नेछ । हामी यो कुरा जान्दछौ कि ग्लिटर यस्तो कुनै जिज होइन, जसबाट भजाइनलमा हालिन्छ । तर, यसको अर्थ यो पनि होइन कि यसलाई हामी भित्र हाल्न सक्दैनौ । बीबीसी हिन्दी